I-CDC: Incazelo 'yokugonywa ngokuphelele' ingadinga ukuvuselelwa
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » I-CDC: Incazelo 'yokugonywa ngokuphelele' ingadinga ukuvuselelwa
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Umqondisi we-US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), u-Rochelle Walensky
U-Walensky ukhuthaze bonke abantu baseMelika abafanelekile ukuthi bathole amashothi abo e-booster, kungakhathaliseki ukuthi ikusasa labo liyoba nomthelela onjani esimweni sabo sokugoma.
Izakhamizi zase-US zibhekwa njengezigonywe ngokugcwele uma zinemithamo emibili yemithi yokugomela i-Pfizer noma yeModerna, noma isibhamu esisodwa esidingekayo ku-Johnson & Johnson jab.
Uma ama-booster eba yingxenye yemfuneko yokuthi abhekwe 'njengagonywe ngokugcwele', abaningi abathole amashothi abo kusenesikhathi bazodinga ukuthola ama-booster.
Ama-booster awo wonke umuthi wokugoma otholakalayo e-US athole ukugunyazwa yi-CDC kanye ne-Food and Drug Administration, kodwa emaqenjini afanelekayo kuphela.
Abantu baseMelika bathathwa njengabagonywe ngokugcwele uma benemithamo emibili yemithi yokugomela i-Pfizer noma yeModerna, noma isibhamu esisodwa esidingekayo ku-Johnson & Johnson jab.
Lokhu kungase kushintshe maduze.
Ngokusho kukaMqondisi wase-US Amasevisi Okulawula Nokuvimbela Izifo (CDC), u-Rochelle Walensky, uthe le nhlangano kungenzeka ilungisa incazelo yokuthi "ugonywe ngokuphelele" ngokumelene ne-COVID-19, egunyazwe futhi etholakalayo ukuze uthuthukise isibhamu.
UWalensky ubuzwe engqungqutheleni yabezindaba yanamuhla, ukuthi labo abafaneleka ukuthwebula i-booster badinga yini ukuthola eminye imithamo ukuze bagcine isimo sabo sokugoma esigcwele.
"Asikayishintshi incazelo 'yokugonywa ngokugcwele,'" kusho u-Walensky, wengeza ngokuthi njengamanje akubona bonke abantu baseMelika abafanelekile ukuthwebula i-booster shot.
"Kungase kudingeke ukuthi sibuyekeze incazelo yethu 'yokugonywa ngokugcwele' esikhathini esizayo," CDC kusho umqondisi.
Uma ama-booster eba yingxenye yemfuneko yokuthi kubhekwe ukuthi 'bagonywe ngokugcwele', abantu abaningi baseMelika abathole izithombe zabo kusenesikhathi bazodinga ukuthola ama-booster ukuze balondoloze isimo sabo 'sokugonywa'.
Amashothi akhuthazayo awo wonke umuthi wokugoma otholakalayo e-US athole ukugunyazwa kwabakwa- CDC futhi Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa (FDA), kodwa ngamaqembu afanelekayo kuphela.
I-CDC igunyaze imithamo ye-booster yabo bonke abantu abadala abathole umuthi wokugomela uJohnson & Johnson, kanye nabantu abadala kanye nabantu abadala abangenawo amandla omzimba emithini yokugomela iModerna nePfizer.
UWalensky kanye ne-CDC bamemezele kuleli sonto ukuthi abantu bangaxuba futhi bafanise amashothi akhuthazayo ngokuphepha. Le nhlangano iphinde yamemezela namuhla ukuthi ukufaneleka kwama-booster kuzokwanda ezinyangeni ezizayo.
U-Walensky ukhuthaze noma ubani ofaneleka ukuthola izithombe ezikhuthazayo, kungakhathaliseki ukuthi ikusasa liba nomthelela onjani esimweni sabo sokugoma.
"Zonke zisebenza kahle kakhulu ekwehliseni ubungozi besifo esibi kakhulu, ukulaliswa esibhedlela, nokufa, ngisho naphakathi kokuhlukahluka kwe-Delta okusakazwa kabanzi," kusho uMqondisi we-CDC.
Ngokwemininingwane yakamuva ye-CDC, ngaphezu kwama-66% abantu base-US bathole okungenani umthamo owodwa wokugomela i-COVID-19.